Baro Cilmiga Geology-ga: Qoraallada, xiisaha iyo sharaxaad faahfaahsan | Saadaasha Shabakadda
Qeybtaan waxaan ka hadli doonaa mowduucyo kala duwan oo ku saabsan cilmiga dhulka. Waxaan baran doonaa geedi socodka kaladuwan ee kaladuwan ee ku dhaca lakabyada gudaha ee Dhulka iyo dibaddaba. Dusha sare ee dhulku wuxuu ku xiran yahay ficillada wakiillada cilmiga dhulka ee kala duwan oo aan baran doonno. Intaas waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato noocyada dhagaxyada jira, sida ay u samaysan yihiin iyo kala soocidda dhammaystiran.
Xaqiiqdi waad kuxirantahay qoraaladaada machadka / jaamacada waxaadna ubaahantahay xoogaa riix ah si aad u cadeyso shakiga aad qabtid. Maqaallada aan daabacno waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan u sharaxno waxyaabaha sida ugu macquulsan uguna fudud, hab fudud oo madadaalo leh. Tani waa sida aqoontu ugu wanaagsan tahay gudaha oo aad wax badan uga baran karto dhulkeenna iyo cilmigiisa geology.
Cilmi dhul Waa saynis mas'uul ka ah barashada kaliya asalka, laakiin sidoo kale isbeddelka Dunida, qaab dhismeedka gudaha iyo dibedda iyo dhammaan howlaha la fulinayo. Waa cilmi aad u xiiso badan maadama aad si fiican u ogaan karto adduunka aad ku nooshahay iyo sida loo sameeyay. Waxaad sidoo kale baran kartaa waxyaabo aadan indhahaaga ku arki karin, sida dhammaan qaab dhismeedka gudaha ee Dhulka iyo sida uu ka kooban yahay.
Dhamaan qodobada kujira qaybtaan waa inaad tixgelisaa waqti kasta waqtiga cilmiga dhulka. Sidan ayaad fikrad fiican ku yeelan kartaa waqtiga u gudbaya meeraheenna inuu ku dhaqmo marka la barbar dhigo miisaanka nolosha aadanaha.
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysan karto mid kasta oo ka mid ah qodobbada aan ku daabacno qaybtaan oo aan kaa caawin karno inta ugu macquulsan si cilmiga dhulku u yahay saynis madadaalo leh.
by Jarmal Portillo samee horas 9 .
Granada waa gobol ay marar badan ka dhacaan dhulgariirro badan. In kasta oo aanay ahayn dhulgariir aad u sarreeya oo khatar ah,…
sida badaha loo sameeyay
by Jarmal Portillo samee 6 maalmood .
Taariikhda oo dhan, dadku waxay la yaaban yihiin sida badaha loo sameeyay. Bilowgii qarnigii XNUMXaad, waxaa la aaminsanaa in…
Waa maxay jasiiradaha
Dunideena waxa jira qaabab kala duwan oo juqraafiyeed kuwaas oo leh astaamo u gaar ah oo ku xidhan asalkooda, qaab-dhismeedka, nooca ciidda, iwm..
waa maxay lava
Volcanoes waa qaar ka mid ah qaababka juqraafiyeed ee ugu cajiibsan, in kasta oo qarxintoodu ay mararka qaarkood gelin karaan…
Dhagaxyada Metamorphic waa koox dhagaxyo ah oo ay sameeyeen joogitaanka walxaha kale ee gudaha…
Sababtoo ah asalkeeda Nahuatl, magaceeda waxaa loola jeedaa "buur sigaar cabbo", dhererkeeda awgeed waa meesha ugu sarreysa ee Mexico ka dib ...
God biyoodka Chicxulub waa bohol saamayn ku leh oo u dhow magaalada Chicxulub ee jasiiradda…
waa maxay jarar
Dhagax waa muuqaal juqraafi ah oo u eg qaab jiirar dheer. Dareenkan, waxay ka soo muuqan kartaa…
Muxuu qabtaa geologist?
Cilmiga lagu barto meeraheena waxa ku jira cilmiga juquraafiga. Qofka baranaya oo ku jimicsada geology...
Markaan eegno canaasiirta miiska xilliyeedka, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa ku haray waxaana loo yaqaannaa dhulal dhif ah. Waxay ku jirtaa…
Dhagaxa Los Gigantes waa mucjisooyin juqraafiyeed oo ku yaal galbeedka Tenerife, Canary Islands, Spain. Goobtu waxay ka kooban tahay…